Renko Amashadi Inkomba MT4 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 Renko Amashadi Inkomba MT4
Isingeniso kuRenko Charts Indicator
1 Isingeniso kuRenko Charts Indicator
2 Uyini Renko Amashadi Inkomba?
3 Isebenza kanjani inkomba yeRenko Charts?
4 Ungawasebenzisa Kanjani Amashadi we-Renko we-MT4?
Amashadi weRenko uhlobo lweshadi lentengo nalo elenziwa eJapan. Kwethulwa okokuqala kubadayisi baseMelika nguSteven Nison encwadini yakhe, Amakhandlela Beyod.
Kuthiwa amaRenko Charts athola igama lawo egameni lesiJapan elithi "renga", okusho ukuthi "isitini". Lokhu kungenxa yokuthi amashadi weRenko akhombisa ukunyakaza kwentengo kusetshenziswa amabhokisi acishe afane nezitini ezihlanganisiwe.
Uyini Renko Amashadi Inkomba?
Ukuze uhlele kahle Ishadi likaRenko, abathengisi bazodinga inkomba yamaRenko Charts ehlela ngokuzenzakalela ukunyakaza kwentengo besebenzisa indlela yeRenko Chart.
Amashadi wamanani wendabuko ethula ukunyakaza kwentengo ngendlela yokulandelana lapho ukunyakaza kwamanani kwethulwa khona maqondana nezikhathi zesikhathi. I-eksisi y yeshadi imelela amaleveli entengo, ngenkathi i-x-axis yeshadi ibonisa izikhathi zesikhathi, okungasuselwa kumaminithi, amahora, izinsuku noma ngaphezulu.
Amashadi eRenko ahluka kakhulu kulolu hlobo lokwethulwa kwamanani ngoba alinaki isikhathi futhi agxile kuphela ekunyakazeni kwentengo. Lokhu kwakha ishadi elikhombisa kahle ukuthambekela nomfutho osuselwa ekunyakazeni kwentengo kusetshenziswa "izitini" noma amabhlogo ukumela iyunithi ngalinye lokunyakaza kwentengo.
Isebenza kanjani inkomba yeRenko Charts?
Amashadi kaRenko asebenzisa "izitini" noma amabhlogo ukumela iyunithi ngayinye yokuhamba kwamanani. Lokhu kusethwa kabusha kweRenko Charts kusebenzisa izitini eziluhlaza okwesibhakabhaka
Esibonelweni esingenhla, isitini ngasinye simele 40 ukunyakaza kwamaphuzu kubhangqa le-GBPUSD. Uma intengo inyuka nge 40 amaphuzu noma 4 amapipi, inkomba yeRenko Charts ingahlela isitini esisodwa esiluhlaza okwesibhakabhaka. Uma intengo idlula 80 amaphuzu noma ngaphezulu, izoklama izitini ezimbili eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokuphambene, uma intengo yehla nge 80 amaphuzu noma ngaphezulu, izophinde ihlele izitini ezimbili ezibomvu phansi.
Abahwebi bangaguqula inani lomkhawulo wamaphoyinti noma amaphayiphu isitini ngasinye asimele ukuze silingane nesilinganiso semali nesikhathi esisetshenzisiwe.
Ungawasebenzisa Kanjani Amashadi we-Renko we-MT4?
Njengoba kushiwo ngenhla, amasheya wamanani ezakhiwo zeRenko Charts kungakhathalekile isikhathi esihlanganisiwe. Kanjalo, izitini ezikumaRenko Charts bezingeke zihambisane nezinti zezibani zaseJapan eshadini lentengo eliyinhloko. Abanye abathengisi abasebenzisa amashadi kaRenko bangazishaya indiva ngokuphelele izinti zezibani zaseJapan futhi bathathe izinqumo zabo kumaRenko Charts kuphela. Baze banciphise ngisho ishadi lentengo langempela futhi babuke kuphela amashadi we-Renko.
Ukushintshwa kombala nokushintshwa kwesiqondisi kuzitini zeRenko Chart kungakhombisa umfutho noma ukuguqulwa kwethrendi. Kanjalo, abathengisi banganquma ukuthenga noma nini lapho iRenko Ishadi iqala ukuhlela imigoqo eluhlaza okwesibhakabhaka futhi ithengise kumabha abomvu. Abahwebi bangakhetha futhi ukungena kwezentengiselwano ngokususelwa kunani elinqunyelwe ngaphambili lezitini ezihamba ngendlela efanayo.
Linda intengo ukubuyela emuva kanye namashadi we-Renko ukwakha izitini ezintathu eziluhlaza okwesibhakabhaka. Nquma intengo ehambelana nokuphakama kwesitini sesibhakabhaka okwesithathu bese usetha i-buy stop oda kulelo zinga lentengo. Setha ukulahleka kokuma ngentengo ehambelana naphansi kwezitini izitini ezintathu ngemuva kwephuzu lokungena okungenzeka.
Ukulandela ukulahleka kokuma ngentengo ehambisana nesitini sesithathu ngemuva kwesitini samanje seRenko Charts. Vumela intengo ukuthi ifike ekulahlekelweni kwesitimela ngemuva kwenzuzo.
Lindela intengo ukubuyela emuva futhi amaRenko Charts akhe izitini ezintathu ezibomvu. Nquma intengo ehambelana naphansi kwesitini esibomvu sesithathu bese usetha i-stop stop oda kulelo zinga lentengo. Setha ukulahleka kokuma ngentengo ehambelana nokuphakama kwezitini izitini ezintathu ngemuva kwephuzu lokungena okungenzeka.
Kunezindlela eziningi zokuhweba amaRenko Charts. Isampula elingenhla linye nje. Abahwebi bangalungisa inani lamabhokisi abazowasebenzisa ukuthola ukungena, kanye nenombolo yamapayipi ababezowabeka njengesisekelo semigoqo yeRenko.
Inkomba yamashadi we-Renko iyithuluzi eliwusizo kakhulu ekuqhubekeni komfutho nasekuthambekeni. Noma kunjalo, abadayisi badinga ukuchitha isikhathi esithile ukujwayela.
Amashadi kaRenko awahambelani nezinti zamakhandlela. Kanjalo, abadayisi kuzodingeka ukuthi babheke njalo kumaRenko Charts ukuthola ukuthi umfutho uyahlehla yini noma cha.
Uma uwuhlobo lomthengisi onesiyalo sokubheka amashadi entengo isikhathi eside, khona-ke amashadi we-Renko angaba ithuluzi eliphumelelayo kakhulu lokuhweba mkhuba kanye nezinguquko zomfutho.
Isikhombi seRenko Charts seMT4 yiMetatrader 4 (MT4) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
I-Renko Charts Indicator ye-MT4 inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene kanye namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Renko Amashadi Inkomba MT4.mq4?
Thwebula Renko Charts Indicator for MT4.mq4
Kopisha i-Renko Charts Indicator ye-MT4.mq4 ku-Directory yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Right uchofoze Renko Amashadi Inkomba MT4.mq4
Inkomba Renko Amashadi Inkomba MT4.mq4 iyatholakala kwi Ishadi yakho
Indlela ukususa Renko Amashadi Inkomba MT4.mq4 kusukela Metatrader yakho Ishadi?
Renko Amashadi Inkomba MT4 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleT MACD kwehlukana MT5 Izinkomba
Isihloko esilandelayoUkungazinzi 2 Izexwayiso zesinyathelo HTF MT5 Indicator